Dood ku saabsaneyd doorashooyinka 2021 oo Fagaaraha Forum ku dhex martay Xaliimo Yarey iyo Maxamed Madeer |
Dood ku saabsaneyd doorashooyinka 2021 oo Fagaaraha Forum ku dhex martay Xaliimo Yarey iyo Maxamed Madeer
Minneapolis (NogobNews) 06/11/2019
Dood-cilmiyeedka Fagaaraha Forum ayaa shalay lagu qabtay magaaladda Minneapolis, waxaana ka qeygal guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismacil Ibrahim (Xalimo Yarey) wasiirkii hore ee Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada mudane Maxamed C/nuur Madeer, kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka qabay doorashooyinka la filaayo ee 2020/21.
“Muddoo 4sano iyo dhowr bilood ah waxaan ku soo jirnay barasho iyo is diyaarin sidii aan u qaban laheyn doorasho qof iyo cod ah, waana sida uu dastuurku na faraayo, waxaana doorashadaas ku tartami doona xisbiyo siyaasadeed. Dhamman gobola waxaa nooga furan xaafiisyo, waxaana noo jooga shaqaale, waxaan sameynay wacyi galin badan, waxaan tagnay goobihii aan sanduuqyada dhigi laheyn, waxaana diyar noo ah qalabkii aan dadka ku diiwaan galin laheyn, waxaana diiwaan galinta la billaabi doonaa bisha March ee 2020” ayay tiri Xaliimo Yarey.
“Caqabada kaliya ee naga hortaagan in doorasho dhacdo 2021 waxay tahay Baarlamaanka Soomaaliya oo aan weli meel marin sharcigii doorashada, waxaan idiin ballan qaadayaa inaan doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah aan sameyn doono haddii sharcigaas la meel mariyo” ayay sii raacisay.
Xaliimo Yarey waxay sheegtay in 57 xisbi ay ilaa hadda isdiiwaan galiyeen, laakiin waxay xustay in yihiin kuwa ku meel gaar ah oo aan weli buuxin shuruudihii rasmiga ahaa ee doorashada. “Soomaaliya iyo Caalamku waa isku fahmeen in doorasho qof iyo cod ah la qabto” ayay ku soo gaban-gabeysay.
“Doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya in dalka amnigiisa la sugo oo la nabadeeyo, kaddibna tirakoob la sameeyo, mar kaas kaddib ayaa la qaban karaa doorasho xor iyo xalaal ah, laakiin maanta waxaan aragnaa in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan gobolada dalka, Xamar ayaa la isku heystaa, waayo waxaan ujeednaa inay jirto ka gaabis, ama dib u gurasho ah
wixii lagu heshiiyay oo aheyd federaleynta dalka” ayuu yiri Madeer oo intaas sii raaciyay.
“Doorashada Sanad iyo dhowr bilood ayaa ka dhimman, mana naqaan jihada aan u socono ilaa hadda, meelaha qaar dalka xitaa dowladdu kama taliso sidee doorasho looga qabtaa. baarlamaankii aan shaqada u dirsanay wuxuu u muuqdaa inuu wada cuuryaamay gebi ahaanba. Xaqiiqada jirta iyo tallaabooyinka aan qaadeyno waa inaan iswaafajinaaa”Madeer wuxuu sheegay in dad badan oo shacabka iyo siyaasiyiin ah ay aaminsanyihiin in Madaweynaha iyo Ra’isul Wasaaruhu ogyihiin inaysan suurtogal aheyn in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah.
Doodaan oo aheyd mid kulul ayaa sidoo kale ka soo qeybgaleyaashii oo ay ku jireen Prof. Abdi Kusow, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Sadiq Warfaa, wasiir ku xigeenka caafimaadka mudane Maxamed Siciid C/llaahi, agaasimihii hore ee madaxtooyada Koofur Galbeed Cali Shaameey iyo aqoonyahanno kale waxaa la isku dhaafsay su’aalo iyo talooyin muhiim u ahaa mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya.